काठमाडौं मेयर अपडेट: बालेनले बढाए अग्रता, अरु कसले कति ल्याए ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
काठमाडौं मेयर अपडेट: बालेनले बढाए अग्रता, अरु कसले कति ल्याए ?
३१ वैशाख, काठमाडौं ।
काठमाडौंको मेयरका उम्मेदवार बालेन साहले ४४४ मत प्राप्त गरेर अग्रता कायम राखेका छन् । उनलाई एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले पछ्याइरहेका छन् । स्थापितको पक्षमा ३७७ मत आएको छ । गठबन्धनकी उम्मेदवार सिर्जना सिंह तेस्रो स्थानमा छिन् । उनले २७४ पाएकी छिन ।
काठमाडौंमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए ।गठबन्धनकोतर्फबाट कांग्रेसकी सिर्जना सिंह मेयरका लागि उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ३२ को गणना हुँदै गर्दा वडा नम्बर २ र ३ को पनि गणना शुरु भएको छ ।
त्यस्तै उपमेयरमा सुनिता डंगोलले धेरैभोट पाएका छन् । सत्ता गठबन्धनको साझा उममेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले ४१ मत ल्याउँदा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डंगोलले १०४ मत पाएकी छिन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको ‘क्रेज’ पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । यो पटकको स्थानीय तहको चुनावमा एमालेका स्थापित र कांग्रेसकी सिंहलाई बालेन शाहका कारण अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्ने आड्कलबाजी गर्न थालिएको छ ।
पाँच वर्षअघिको चुनावमा एमाले मेयर उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीलाई झन्डै २० हजार मतले हराएका थिए। त्यतिखेर काठमाडौंका मुख्य नेवार बस्तीहरूबाट विद्यासुन्दरले आफूभन्दा १२ हजार बढी मत ल्याएको जोशी बताउँछन्।
एमाले नेता तथा सांसद रामवीर मानन्धरले पनि एमालेले त्यो बेला कोर–सिटीबाट १२ हजार बढी मत ल्याएको पुष्टि गरे। यसरी कोर–सिटीको नेवार समुदायबाट कम मत पाएकै कारण जोशीले कांग्रेसकै उपमेयर हरिप्रभा खड्गीभन्दा कम मत ल्याएका थिए।
खड्गीले ५८ हजार भोट ल्याउँदा जोशीले ४५ हजार मात्र पाएका थिए। शाक्यले मेयरमा पाएको ६५ हजार भोट उपमेयरमा खड्गीले पाएभन्दा ७ हजार जति मात्रै धेरै हो। यसपालि कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले कोर–सिटीबाट अघिल्लोपटक जोशीले ल्याएभन्दा धैरै मत ल्याउने आंकलन गरिएको छ ।
विद्यासुन्दरलाई भोट दिएका मतदातामध्ये धेरैले यसपालि सिर्जनालाई भोट दिन्छु भनेका छन्। तर यसअघि कांग्रेसलाई दिएर यसपालि एमालेलाई दिन्छु भन्नेको संख्या थोरै रहेका छन् ।
अघिल्लोपटक एमालेलाई भोट दिएर यसपालि कांग्रेसलाई दिन्छु भन्ने सबै एमालेका परम्परागत मतदाता होइनन्। तीमध्ये कतिपयले आफू कांग्रेस भए पनि अघिल्लोपटक शाक्यलाई हेरेर मत दिएको बताए।